မြန်မာအသင်း၏ ပါရာလမ်းပစ်ပြိုင်ပွဲရလဒ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပါရာလမ်းပစ် မှ မြန်မာနိုင်ငံ အသင်း
Burma (၁၉၇၆ - ၁၉၈၄)
Myanmar (၁၉၉၂ - ၂၀၀၈ - ၂၀၁၂ - ၂၀၁၆)
မြန်မာနိုင်ငံသည် ပါရာလမ်းပစ်ပြိုင်ပွဲ(မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲ)တွင် ရံဖန်ရံခါဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်​လေ့ရှိသည်။ပထမဆုံးအ​နေဖြင့် ၁၉၇၆ တိရွန်တို​နွေရာသီပါရာလမ်းပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ဦး​တင်​ငွေမှာ ပထမဆုံးမြန်မာရွှေတံဆိပ်ရရှိသူဖြစ်သည်။100 m C1 ပွဲစဉ်တွင်​ရွှေတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည်။သူနှင့်အတူဦး​အောင်သန်းက​ငွေတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည်။100 m Cပွဲစဉ်တွင် ဦးတင်ဝင်းမှ ​ကြေးတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည်။၁၉၈၀ပြိုင်ပွဲတင်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့​ပေ။၁၉၈၄ပြိုင်ပွဲတွင် ​ဘော်လီ​ဘောနှင့်​ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲတို့တွင် ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ဦးတင်​ငွေက အမြင့်ခုန်တွင် ရွှေတံဆိပ်၊long jumpတွင် ​ငွေတံဆိပ်ရရှိကာ ဦး​အောင်ကြီးမှ ​ငွေနှင့်​​ကြေးရရှိခဲ့သည်။
၁၉၈၈ နိုဝင်ဘာအ​ရေးအခင်း​ကြောင့် ​အောက်တိုဘာလတွင်ကျင်းပ​သော ၁၉၈၈ပြိုင်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိခဲ့​ပေ။နိုင်ငံ၏ အင်္ဂလိပ်အမည်ကို "Burma"မှ "Myanmar"သို့​ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး နိုင်ငံကုဒ်ကိုလည်း ''BIR''မှ ''MYA''သို့​ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၁၉၉၂ဘာစီလိုနာပါရာလမ်းပစ်တွင် ဦး​ကျော်ခိုင်တစ်ဦးသာဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ထို့​နောက် ၃ကြိမ်ဆက်ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ၂၀၀၈​ပြိုင်ပွဲတွင်မှ နိုင်ဝင်း၊စစ်​အောင်နိုင်၊စန်း​အောင်ဝင်းတို့ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။သို့​သော် ​အောင်မြင်မှုများမရရှိခဲ့​​ပေ။
''Burma''အမည်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့စဉ်က ရွှေတံဆိပ် ၂ခု၊​ငွေတံဆိပ် ၃ခု၊​ကြေးတံဆိပ် တခု၊စုစု​ပေါင်းဆုတံဆိပ် ၇ခုရရှိခဲ့သည်။''Myanmar''အမည်ဖြင့် ဆုတံဆိပ်တစ်ခုမျှမရရှိ​သေး​ပေ။​ဆောင်းရာသီပါရာလမ်းပစ်တွင် တစ်ကြိမ်မျှ ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိ​​ပေ။
01 ! ရွှေတံဆိပ်
02 ! ​ငွေတံဆိပ် long jump
02 ! ​ငွေတံဆိပ် ဦး​အောင်သန်း ​ပြေးခုန်ပစ် မီတာ ၁၀၀
02 ! ​ငွေတံဆိပ် ဦး​အောင်ကြီး ​ပြေးခုန်ပစ်
03 ! ​ငွေတံဆိပ်
03 ! ကြေးတံဆိပ် ဦးတင်ဝင်း ​ပြေးခုန်ပစ် မီတာ ၁၀၀
အားကစား 01 ! 02 ! 03 ! Total
​ပြေးခုန်ပစ် ၂ ၃ ၂ ၇
၂ ၃ ၂ ၇
Retrieved from "https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာအသင်း၏_ပါရာလမ်းပစ်ပြိုင်ပွဲရလဒ်&oldid=421105"
This page was last edited on2September 2018, at 04:29.